2016 April - All Things Myanmar Burmese
Another Story of Singer So Tay…
“ဆိုတေးအားထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက်၎င်း၏ဇနီးဆိုသူမှတာဝန်ယူပေးမည်ဟုဆို” ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်မှုကြောင့်မန္တလေးဆေးရုံတွင်တေးကုသမှုခံယူနေရသောတေးသံရှင်ဆိုတေး၏အခြေအနေမှာမသက်သာပါက ထိုင်းနိုင်ငံရှိဆေးရုံ၌ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရေးအတွက်၎င်း၏ဇနီးဆိုသူ မချိုချို(ခ) Cream က တာဝန်ယူကုသပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ၄င်းနှင့်ဆိုတေး(ခ)အောင်သက်ပိုင်တို.မှာ မြ၀တီမြို.တွင်တွေ.ဆုံချစ်ကြိုက်ကာထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို.တွင်အတူပေါင်းသင်းနေ ထိုင်ခဲ.ခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လအတွင်းကဆိုတေးမှ၎င်း၏ဇနီးဆိုသူအား၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ.ဆုံပေးခဲ.ကြောင်း၊ထိုနောက် ဇူလိူင်လ(၄)ရက်နေ.တွင် ၄င်းတို.နှစ်ဦးသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်ရှိ ၄င်းဇနီးဟုဆိုသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူသွားရောက်နေထိုင် ခဲ.ကြကြောင်း ၊ထို.နောက်ဆိုတေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌၄င်းလက်ခံထားသောရှိုးပွဲရှိသည်ဟုဆိုကာ၎င်းမှ ဘန်ကောက်မှရန်ကုန် သို.လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊၄င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူကမဲဆောက်မှ ရန်ကုန်သို.လည်းကောင်းဇူလိုင်(၁၀)ရက်နေ.တွင်ရောက်ရှိ ခဲ.ကြကြောင်း၊၄င်းနောက်ဆိုတေးမှ၎င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူအားရန်ကုန်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ခေတ္တထားခဲ.ကာပုဂံမြို.တွင်ရှိုးပွဲရှိ သည်ဟုဆိုကာဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်နေ.တွင်တောင်သာမြို.သိုရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမှသွားရောက်စဉ်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ် ပွားခဲ.ခြင်းဖြစ်ကြောင်း
Is Inlay Lake dried up?
ဤ ဓါတ် ပုံ သည် (17-04-2013 ) ရက် က ရိုက် ယူ ထား သော
Funny Thai TV Commercial
Feel like fainting? Try peppermint gel.
Google Thailand wishes you allaHappy Thingyan! Thingyan Moe by Zaw Paing
#NCKmemo ကျွန်မ မရေးဘူးလို့နေနေတာပဲ(ရေးပြရင်အရှည်ကြီးမို့ ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့တာဝန်ကနေအနားယူထားတာ၃နှစ်နီးပါးရှိနေပြီမို့) ဒါပေမယ့် မီးပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအမြင်တွေအမျိုးမျိုးရေးနေကြတော့ အရင်အလုပ်သံယောဇဉ်လေးနဲ့ ဗဟုသုတလေးရှယ်ချင်လာတယ် ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ System Break Downဖြစ်တာဟာ လက်ရှိအစိုးရနဲ့လည်းမဆိုင်သလို အရင်အစိုးရကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းတွေလုပ်စားတာလည်းမဟုတ်သလို မသမာသူလူတစ်စုက အကွက်ကျကျစီစဉ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မက အရမ်းကြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိပေမယ့်ကိုယ်သိသလောက် ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလောက်အတွေ့အကြုံဗဟုသုတလေးတော့ အကြမ်းဖျင်းလေးသူငယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေချင်ပါတယ် အသေးစိပ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းများသွားမှာပါ ကျွန်မအကောင့်ထဲမှာ အရင်MOEPမှာလုပ်တုန်းကကျွန်မရဲ့ဆရာသမားတွေ Seniorတွေ Juniorတွေလည်းရှိနေလို့ လိုတာလေးတွေဝိုင်းထောက်ပေးကြပါလို့အရင်တောင်းဆိုပါရစေ ရပ်ကွက်လိုင်းအပြစ်လေးတွေတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး National Grid အကြောင်းလေးသိရင်မှန်းလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်မတို့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေးကို System Ringတစ်ခုအနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် ဒီSystem ဟာ အဝင်နဲ့အထွက် balanceညီနေဖို့အတွက် Generation and Demand ကို 24/7စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရပါတယ် အဲ့လိုထိန်းညှိဖို့အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ ဓာတ်အားခွဲရုံများ မှာ သက်ဆိုင်ရာလိုင်းများ […]
Letter to Mandalay Mayor Dr.Ye Lwin
မြို့တော်ဝန် ဆရာဦးရဲလွင် သို့ ဟာဂျူလီ(ကသာ)၏ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ… ***************** ဆရာဦးရဲလွင် ခင်ဗျား…. ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ..၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီး နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ မန်းတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခဦးအောင်မောင်းကြီးကို မြို့တော်ဝန်ခန့်လိုက်တော့ မန္တလေးသားတွေအတော်များများ နှာခေါင်းရှုံ့ကြပါတယ်ဆရာ၊တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတစ်ယောက်အနေနဲ့ မန္တလေးမြို့တော် လှပရေး ဖွံ့ဖြိုးဝေစည်ရေး လမ်းတံတားများ သန့်ရှင်းလှပလုံခြုံရေး အပါအဝင် စည်ပင်သာယာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်နိုင်လောက်ဘူး လို့လည်း ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်၊မန်းမြို့တော်သူ မြို့တော်သားတွေ ထင်တဲ့အတိုင်းလည်း ဦးအောင်မောင်းရဲ့ ၄နှစ်တာကာလအတွင်း မန္တလေးမြို့တော်ဟာ ‘ ဝေလေလေ’အဆင့်နဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာ၊ ထားပါတော့ဆရာ၊ဒါတွေက ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က ကိစ္စတွေပါ၊ အခု ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက NLDအစိုးရအကြောင်းတွေပါ…။ NLD အနိုင်ရပြီး အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ သမ္မတဖြစ်မလဲ? ဘယ်သူ ဘယ်တိုင်း ဘယ်ပြည်နယ် […]
Ni Ni Khin Zaw’s shwe Pyi Nan commercial shooting
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for April, 2016.